Habab loo xaliyo 𝐌𝐮𝐬𝐡𝐤𝐢𝐥𝐚𝐝aha – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Habab loo xaliyo 𝐌𝐮𝐬𝐡𝐤𝐢𝐥𝐚𝐝aha
Habab loo xaliyo 𝐌𝐮𝐬𝐡𝐤𝐢𝐥𝐚𝐝aha
Masoo kici karo salaadda subax xataa haddaan gambaleel ku xerto ⏰.
Intaadan seexanin habeenkii soo weyso qaado oo aqriso: Allaahumma laa tu’minnii makrak walaa tunsinii dikrak walaa tajcalnii minal qaafiliin, aquumu inshaa alaahu tacaalaa saacadda (kow iyo toban saac iyo bar ama 10 saac)
(اللهم لا تؤمني مكرك ولا تنسيني ذكرك ولا تجعلني من الغافلين, اقوم إن شاء الله تعالى الساعة كذا…. magaca saacadda aa dooneyso inaa soo kacdo)
Ilaahey wuxuu u xilsaarayaa laba malag oo ku kiciya saacaddaas, waa haddey dhab kaa tahay inaa soo kacdo subixii oo dooneyso in ay salaad dambe kaa tagin.
Gurigeena waa dhibaato socota oo buuq iyo dagaal kama dhamaado?
Sabata mashaakilka guryaha waa sheydaanka oo ma noqdo guriguu joogo guri degen, sidaa awgeed ku aqri gurigaaga qur’aanka waayo sheydaanka uma soo dhawaado guri qur’aanka laga aqriyo maalin walba, waxaana dega malaa’igta oo wuxuu noqdaa guri degen oo barakeysan.
Waxaan dareemayaa ceriiri iyo murug?
Istiqfaarta badi oo kala fur kitaabka qur’aanka oo aqri aayadaha aa ka gaarto, kadibna aqriso ducada murugta:(allaahumma innii acuudu bika minal hammi wal xazan wa acuudu bika minal cajzi wal kasal, wa acuudu bika minal jubni wal bukhl, wa acuudu bika min qalabatiddeyni waqahri rijaal)
(اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل, وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال).
Caruurta tarbiyeyntooda baan dhib ku qabaa?
U ducee caruurtaada oo alle uga bari in uu ka dhigo kuwo saalixiin ah oo raaca wadada islaamka ee suuban waayo ducada waalidiinta ay ilmahooda u duceynayaan waa mustajaabo, sidoo kale adiga waalidka ahoow waalidkaaga baari u noqo oo ka duceyso hadey noolyihiin, hadey dhinteenna yeysan aktaada ka dhiman ee u ducee sadaqo u bixi si ay caruurtaada kuugu noqdaan kuwo baariyaal ah.
Markaa dukanayo fikirkeyga meelo kale ayuu aadaa oo anoo salaadi kabaxay ayan is arkaa?
Salaadda markaa dukaneyso indhahaaga ku haay meesha aa ku sujuudeyso, markaa fadhisana farta ataxiyaadka fiiri, suuradaha aa ku dukaneysana cusbooneysii oo marba suurad aadan dhawaan ku dukanin ku aqri salaadda, hana boobsiinin oo si degen u aqri.
Jinka baan ka cabsadaa waxaan u haystaa inuu guriga igula noolyahay?
Jinka waa maqluuq uu alle abuuray oo leh gaal iyo muslim waana wax caadi ah inuu iskumeel nala joogo, lkn adiga hadduu gurigaaga yahay guri qur’aan guri duco, guri istiqfaar, waa hubaal jiniga islaamka ah ayaa kula soo dersaya oo wax aa ka cabsootaba ma jiraan, lkn haddaa heesaha iyo filimaanta iyo wixii xun laga xiiseeyo gurigaaga adiga ayaa soo dhaweystay sheydaanka iyo jinka gaalka ah ee kaa sii fogeynaya allaah kuna dareensiinaya walwla iyo murugo.
Waxaa jiro dhibaatooyin iyo caqabado aanan xalin karin oo culeys weyn iyo fikir ii sababa?
Ilaahey tala saaro mar walba oo duceyso inuu ilaahey kuu xaliyo waxaa awood ulaheyn oo dhan, midna ogsoonoow ilaaheey qofna dusha kama saaro wax uu tabar iyo awood u laheyn, waxa kugu dhaca waad xalin kartaa adiga oo alle talo saaranaya oo weydiisabaya towfiiq iyo inuu kuu sahlo uu kuugu hago wadada ugu fudud ee aad ku xalin karto mashaakilkaaga.
Marmarka qaar waxyaabo ayaa gurigeena ka dhumo oo aan waayaa markaan raadiyo?
Waa soo xasuusaneysaa halkaa dhigtay oo waad heleysaa insha allaah kaliya u qabo bisinka oo xus magaca rabbi oo ku salli nabiga scw kadibna waa heleysaa insha allaah.
haddaa ka faa’iidday ❤ iyo share baa kugu waajibay.
Previous articleEthiopia oo ku eedaysay warbaahinada caalamiga ah iney weerar ku hayaan
Next articleWax kabaro Cuntoooyinka nadiifiya Beerka. iyo dhibaatada dufanka badan .
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka jawaabey eedeymo usoo jeediyey...
Ayax guuraya oo ku habsadey qaybo ka mid ah gobolka...